Ọrụ nke Ndịozi – 2azụ
Home / Bible / Ọrụ nke Ndịozi
The Ọrụ nke NdŽozi-egosi na isi na-subpages a page. Ha nwere ọmarịcha “slugs” dị ka /bible/acts/ch-1. (Anyị na-na na banyere ọkara n'ime kewara ndị isi dị ka 11-28 egosi na Ch 11.) Otú ọ dị, dum akwụkwọ na-dị n'okpuru, kwa.
Ọrụ nke Ndịozi 1
1:1 N'ezie, O Theophilus, M dere mbụ okwu banyere ihe niile na Jizọs malitere ime na ịkụzi,
1:2 akụziri ndị Ndịozi, ọ họọrọ site na Mmụọ Nsọ, ọbụna ruo mgbe ụbọchị nke ọ na-e elu.
1:3 Ọ nwekwara ihe ndị na ya dị ndụ ha, mgbe ya na Rihanna, pụtara na ha ruo ụbọchị iri anọ na-ekwu okwu banyere alaeze Chineke na ọtụtụ elucidations.
1:4 Na-eri nri na ha, ọ gwara ha na ha ekwesịghị ịhapụ Jerusalem, ma na ha kwesịrị ichere maka na Nkwa nke Nna, "Banyere nke unu nụrụ,"Ka o kwuru, "Si m ọnụ.
1:5 n'ihi na Jọn, n'ezie, ji mmiri mee baptizim, ma ị ga-baptizim na Mmụọ Nsọ, ọ bụghị ọtụtụ ụbọchị si ugbu a. "
1:6 Ya mere, ndị zukọrọ ọnụ jụọ ya ajụjụ, si, "Onyenwe anyị, bụ nke a mgbe i ga-eme ka ala-eze Israel?"
1:7 Ma ọ sịrị ha: "Ọ bụghị nke gị ịmata ugboro ma ọ bụ oge ndị, nke Nna setịpụrụ aka ya ikike.
1:8 Ma, ị ga-anata ike nke Mmụọ Nsọ, agafe ị, na ị ga-abụ ndị àmà m na Jerusalem, ma na Judia dum nakwa na Sameria, na ọbụna ruo nsọtụ ụwa. "
1:9 Na mgbe o kwusịrị ihe ndị a, mgbe ha na-na-ekiri, e buliri ya elu, na a ígwé ojii kpọọrọ ya site n'anya-ha.
1:10 Na mgbe ha na-ele ya na-aga ruo heaven, le, ndị ikom abụọ ada nso ha na-acha ọcha vestments.
1:11 Ha we si: "Ndị ikom nke Galili, ihe mere i ji guzo n'ebe a-ele anya n'eluigwe? Nke a Jesus, onye e si ị gaa n'eluigwe, gālaghachi na dị nnọọ otú ahụ unu hụrụ ya na-aga n'eluigwe. "
1:12 Mgbe ahụ, ha laghachiri na Jerusalem si n'ugwu, nke a na-akpọ Olivet, nke na-esote Jerusalem, n'ime a n'ụbọchị izu ike njem.
1:13 Ma mgbe ha banyere n'ime cenacle, ha rịgooro ebe Pita na Jọn, James na Andrew, Philip na Thomas, Bartholomew na Matthew, James Alfiọs na Saịmọn onye na Zealot, na Jud nke James, na-anọ.
1:14 All ndị a na-anọgidesi ike na otu ekpere na ndị inyom, na na Mary, nne Jizọs, na ụmụnne ya ndị ikom.
1:15 N'ụbọchị ndị, Peter, ebili n'etiti ụmụnna, kwuru (ugbu a ìgwè mmadụ nke ndị mmadụ kpam kpam bụ dị ka otu narị na iri abụọ):
1:16 "Noble ụmụnna, Akwụkwọ Nsọ a ga-emezu, nke Mmụọ Nsọ buru amụma site n'ọnu ndi David banyere Judas, onye bụ onye ndú nke ndị na-achọ ijide ya Jesus.
1:17 Ọ e-agukọta n'etiti ayi, na ọ họpụtara otutu maka ozi a.
1:18 Na a mmadụ na-nwere ihe ala na ụlọ si ụgwọ ọrụ nke ajọ omume, ya mere, ebe e kwubara, ọ wupu oghe n'etiti na ya nile esịtidem akụkụ wụkwasịrị.
1:19 Na a niile wee mata ndi bi na Jerusalem, nke mere na a na ubi a na-akpọ n'asụsụ ha, Akeldama, nke ahụ bụ, 'Ala Ọbara.'
1:20 N'ihi na a dere n'akwụkwọ Abụ Ọma: 'Ka ha ebe obibi abụ ebe tọgbọrọ n'efu na ndị o nwere ike ịbụ na ọ dịghị onye na-elu bi n'ime ya,'Na' Ka onye ọzọ ya episcopate. '
1:21 Ya mere, ọ dị mkpa na, nke ndị ikom a bụ ndị e gbakọta na anyị nile oge na Onyenwe anyị Jizọs gara wee si n'etiti ayi,
1:22 -amalite site na baptism nke Jọn, ruo ụbọchị mgbe ọ ka e si anyị, otu n'ime ndị a ka a àmà na anyị nke mbilite n'ọnwụ ya. "
1:23 Ha họpụtara abụọ: Joseph, bụ onye a kpọrọ Barsabbas, onye a kpọkwara Jọstọs, na Matthias.
1:24 na-ekpe ekpere, ha kwuru: "Gị, O nwe-ayi, onye maara obi nke onye ọ bụla, ekpughe nke otu n'ime abụọ ndị a ị họọrọ,
1:25 na-a ebe ozi a na ọrụ onyeozi, nke Judas prevaricated, nke mere na ọ gakwuru onwe ya. "
1:26 Na fere nza banyere ha, na nza Matthias. Ọ na nọmba ndị ozi iri na otù Ndịozi.
Ọrụ nke Ndịozi 2
2:1 Na mgbe ụbọchị Pentikọst e dechara, ha niile zukọrọ n'otu ebe.
2:2 na mberede, e wee a ụda nke si n'eluigwe, dị ka nke a ifufe na-eru nso n'ike, o wee ju dum ụlọ ebe ha niile nọ ala.
2:3 Na e mee ka ha hụ iche iche asusu di iche iche, dị ka nke ọkụ, nke biri n'elu ọ bụla n'ime ha.
2:4 Na ha nile we juputa na Mọ Nsọ. Ha wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, dị nnọọ ka Mmụọ Nsọ nyere ikwupụta okwu ha.
2:5 Ma e nwere ndị Juu anọ na Jerusalem, pious ndị si mba ọ bụla nke dị n'okpuru eluigwe.
2:6 Na mgbe a ụda mere, Ìgwè mmadụ bịara ọnụ na mgbagwoju anya n'uche, n'ihi na onye ọ bụla nọ na-ege ha na-ekwu okwu n'asusu nke aka ya.
2:7 Mgbe ahụ niile ju ha anya, na ha na-eche, si: "Lee, -adịghị niile nke ndị a na-ekwu okwu Galili?
2:8 Oleekwa otú o si na anyị na onye ọ bụla nụrụ ka ha na anyị onwe asụsụ, n'ime nke a mụrụ anyị?
2:9 Parthians na Midia na ndị Ilam, na ndị bi na Mesopotemia, Judea na Kapadoshia, Pọntọs na Esia,
2:10 Frijia na Pamfilia, Egypt na akụkụ nke Libya nke bụ gburugburu Cyrene, na bịara ọhụrụ nke Ndị Rom,
2:11 otú ahu Juu na ndị a tọghatara ọhụrụ, Cretans na Arab: anyị nụrụ ka ha na-ekwu okwu nke onwe anyị na-asụ asụsụ ahụ dị ike omume Chineke. "
2:12 Ha nile na anya, na ha na-eche, na-asị ibe: "Ma gịnị ka nke a pụtara?"
2:13 Ma, ndị ọzọ ekwa emo kwuru, "Ndị a bụ ndị jupụtara mmanya ọhụrụ."
2:14 ma Pita, eguzo ọtọ na iri na otu, welie olu-ya, na ọ gwara ha: "Ndị ikom nke Judea, na ndị niile na-anọ na Jerusalem, ka a mara na i, na tọọ ntị gị n'ala m okwu.
2:15 N'ihi na ndị ikom ndị a na-adịghị na-egbu n'ụzọ, dị ka i chere, n'ihi na ọ bụ nke atọ hour nke ụbọchị.
2:16 Ma nke a bụ ihe e kwuru nke onye amụma Joel:
2:17 'Ma nke a ga-abụ: na n'ụbọchị ikpeazụ, ka Jehova kwuru, M ga-maka, si m Spirit, dakwasị anụ ahụ niile. Gị na ụmụ gị ndị inyom ga-ebukwa amụma. Na gị na-eto eto ga-ahụ ọhụụ, na gị okenye ga-nrọ nrọ.
2:18 Na-, m ndị ikom na ndị inyom na ohu n'ụbọchị ndị, M ga-awụkwasị m Spirit, na ha ga-amụma.
2:19 Na m ga-awụkwasị ebube n'elu-igwe n'elu, na ihe ịrịba ama n'ụwa n'okpuru: ọbara na ọkụ na anwụrụ ọkụ Alụlụụ.
2:20 Anyanwụ ga-ghọọ ọchịchịrị na ọnwa ghọọ ọbara, tupu oké na ìhè ụbọchị Jehova abịarute.
2:21 Nka gābu-kwa: onye ọ bụla ga-akpọkukwa aha Jehova ga-azọpụta. '
2:22 Men nke Israel, nụrụnụ okwu ndị a: Jizọs onye Nazaret bụ nwoke na-egosi na Chineke nọ n'etiti unu site na ọrụ ebube na ọlu-ebube na ihe ịrịba ama na Chineke na-emezu site n'aka ya n'etiti unu, dị nnọọ ka ị na-mara.
2:23 nwoke a, n'okpuru definitive plan na ụzọ mara nke Chineke, a napụtara site n'aka ndị ezighị ezi, n'ala, ma gbuo.
2:24 Ma onye Chineke kpọlitere anyajiwo sorrows of Hell, maka na-ọ gaghị ekwe omume n'ihi na ya ga-enwe site na ya.
2:25 N'ihi na Devid kwuru banyere ya: 'M hụrụ Jehova mgbe niile n'anya m, n'ihi na ọ nọ m n'aka nri, ka m wee ghara kpaliri.
2:26 N'ihi nke a, obi m ṅụrịrị ọṅụ, na m ire nke nwere aṅụrị. Ọzọkwa, na anụ ahụ m ga-ezu ike na olileanya.
2:27 N'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m ka Hell, ma ọ bụ ka ị ga-ekwe ka gị na Onye Nsọ hụ ire ure.
2:28 I mewo ka m mara ụzọ ndụ. Ị ga kpamkpam jupụta m obi ụtọ site n'ihu gị. '
2:29 Noble ụmụnna, hapụ m ka m na-ekwu okwu n'enweghị ihe mgbochi gị banyere Onyeisi David: n'ihi na ọ agabigawo elìe, na ya n'ílì bụ na anyị, ọbụna ruo taa.
2:30 Ya mere, ọ bụ onye amụma, n'ihi na ọ maara na Chineke ṅụụrụ iyi ya banyere mkpụrụ nke ya n'úkwù, banyere Onye ga-anọdụ n'ocheeze ya.
2:31 ụzọ hụ nke a, ọ na-ekwu banyere mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. N'ihi na ọ nọ ma hapụrụ na Hell, ma ọ bụ, anụ ahụ ya ahụghịkwa ire ure.
2:32 Nke a Jesus, Chineke kpọlitere ọzọ, na nke a na anyị nile bụ ndị àmà.
2:33 Ya mere, na-elu gaa n'aka nri nke Chineke, na ọ natara site n'aka Nna ahụ Nkwa nke Mmụọ Nsọ, ọ wukwasi a, dị nnọọ ka ị na-ahụ ugbu a ma na-anụ.
2:34 N'ihi na Devid na-arịgo n'eluigwe. Ma ya onwe ya kwuru: 'Jehova gwara Onyenwe m: Nọdụ ala n'aka nri m,
2:35 ruo mgbe m na-eme ndị iro gị gị ihe mgbakwasị ụkwụ. '
2:36 Ya mere, nwere ike na ụlọ Izrel dum mara n'ezie na Chineke mere nke a otu Jesus, onye unu kpọgidere n'osisi, Onyenwe anyị na Kraịst. "
2:37 Ma mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha nwere mwute na obi, ha we si Pita na ndịozi ndị ọzọ: "Gịnị ka anyị kwesịrị ime, magburu ụmụnna?"
2:38 Ma n'ezie, Pita sịrị ha: "Mee penance; na baptism, onye ọ bụla nke ị, n'aha nke Jesus Christ, n'ihi ngbaghara mmehie gị. Ị ga-enweta onyinye nke Mmụọ Nsọ.
2:39 N'ihi na Nkwa bụ unu na ụmụ gị, na ihe niile nọ n'ebe dị anya: maka onye ọ bụla Jehova bụ Chineke anyị ga-akpọ. "
2:40 Ọzọkwa, na dị nnọọ ka ọtụtụ ndị ọzọ okwu, ọ gbara àmà na ọ gbara ha ume, si, "Zọpụta onwe gị site rụrụ arụ ọgbọ."
2:41 Ya mere, ndị nabatara okwu ya ndị e mere baptizim. Na puku mkpụrụ obi atọ e kwukwara n'ụbọchị ahụ.
2:42 Ugbu a, ha na-anọgidesi ike ozizi nke NdŽozi, na na udo nke n'inyawa achicha, na na na-ekpe ekpere.
2:43 Na egwu mepụtara na mkpụrụ obi ọ bụla. Ọzọkwa, ọtụtụ ọrụ ebube na ihe ịrịba ama na-emezu site na Ndịozi na Jerusalem. Na e nwekwara oké egwu na onye ọ bụla.
2:44 Ma mgbe ahụ niile bụ ndị kweerenụ nwere ọnụ, na ha na-enwe ihe niile ọnụ.
2:45 Ha nọ na-ere ihe onwunwe ha ma ibu, na nkerisi ha niile, dị nnọọ ka ọ bụla n'ime ha chọrọ.
2:46 Ọzọkwa, ha nọgidere na-, kwa ụbọchị, na-nke otu n'ime ụlọ nsọ na inyawa achicha n'etiti ụlọ; ha we were ha nri na obi ụtọ na mfe nke obi,
2:47 na-eto Chineke ukwuu, na-ejide ihu ọma mmadụ niile. Na ụbọchị ọ bụla, Jehova ụba ndị a na-azoputa n'etiti ha.
Ọrụ nke Ndịozi 3
3:1 Ma Pita na Jọn wee ruo n'ụlọ nsọ ahụ n'oge awa nke itoolu nke ekpere.
3:2 Ma otù nwoke, nke dara ngwurọ site n'afọ nne-ya, a na-ebu ya na. Ha ga-ebikwasị ya ụbọchị ọ bụla n'ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ nsọ, nke a na-akpọ Beautiful, ka o wee na-arịọ ebere ndị na-abanye n'ime ụlọ nsọ.
3:3 Nwoke a, mgbe ọ hụrụ Pita na Jọn na-amalite ịbanye n'ụlọ nsọ, yoro, ka o wee na-enweta ebere.
3:4 Mgbe ahụ, Pita na Jọn, ele anya na ya, kwuru, "Lee anyị."
3:5 O legidere ha, na-enwe olileanya na ọ nata ihe n'aka ha.
3:6 Ma, Pita kwuru: "Silver na ọlaedo abụghị nke m. Ma ihe m nwere, M na-enye gị. Na aha Jizọs Kraịst onye Nazaret, bilie ije. "
3:7 Ma na-ewere ya n'aka-nri, na o weliri ya elu. Ozugbo ya ụkwụ na ụkwụ na-ike.
3:8 Na wulie elu,, o we guzo na-eje ije gburugburu. Na ọ banyere na ha n'ime ụlọ nsọ, na-eje ije na-awụli elu na-eto Chineke.
3:9 Na ndị niile hụrụ ya na-eje ije ma na-eto Chineke.
3:10 Ha ghọtara na ya, na ọ bụ otu ihe ahụ otu onye nọ ọdụ maka ebere n'Ọnụ Ụzọ Mara Mma nke temple. Na ha juputara na nrube na anya na ihe mere ya.
3:11 Mgbe ahụ, dị ka ọ na-ejide Pita na Jọn, niile ndị mmadụ gbara ha na n'ihe owuwu ụzọ mbata, nke a na-akpọ Solomon, na-iju-anya.
3:12 ma Pita, hụrụ nke a,, zara ndị: "Ndị ikom nke Israel, ihe mere i ji na-eche na nke a? Ma ọ bụ gịnị ka ị na-ekporopụ na anyị, dị ka ọ bụ site n'ike aka anyị ma ọ bụ ike na anyị mere ka nwoke a na-eje ije?
3:13 Chineke nke Abraham na Chineke nke Aisak na Chineke nke Jekob, Chineke nke nna nna anyị hà, ebube ya Ọkpara Jesus, onye unu, n'ezie, nyefeela na agọ n'ihu Pilate, mgbe ọ na-enye ikpe hapụ ya.
3:14 Mgbe ahụ ị gọrọ agọ Nsọ na Naanị Otu, na rịọrọ maka igbu ọchụ nwoke ga-enye gị.
3:15 N'ezie, ọ bụ Onye chepụtara Life onye igbu gị, Chineke kpọlitere ndị nwụrụ anwụ, onye anyị bụ ndị àmà.
3:16 Na site na okwukwe na ya aha, nwoke a, onye ị hụrụ na a mara, ka nkwenye ya aha. Na okwukwe site n'aka-ya nyere nwoke a zuru ike n'anya gị niile.
3:17 Ma ugbu a,, ụmụnna, Amaara m na unu mere nke a site na-amaghị, dị nnọọ ka gị ndú mere.
3:18 Ma Chineke esiwo otú a mezuo ihe ndị ọ kpọsara tupu oge eruo site n'ọnụ ndị amụma nile: na Kraịst ya ga-ata ahụhụ.
3:19 Ya mere, ichegharị, a tọghatara, nke mere na mmehie gị nwere ike kpochapụrụ efep.
3:20 Ọzọkwa, mgbe oge nke nkasi-obi ga-erutela si n'iru Jehova, ọ ga-eziga Onye e buru amụma na ị, Jesu Kristi,
3:21 onye heaven na-ga-elu, ruo mgbe oge nke mweghachi nke ihe nile, nke Chineke kwuru okwu nke sitere n'ọnu amụma ya dị nsọ, si afọ gara aga.
3:22 N'ezie, Moses kwuru: 'N'ihi na Jehova bụ Chineke gị ga-ewu a amuma unu site ụmụnna gị, onye dị ka m; otu ị ga-ege ntị dị ka ihe niile bụla na ọ ga-agwa gị okwu.
3:23 Nka gābu-kwa: mkpụrụ obi ọ bụla bụ onye ga-ege ntị na-amuma a ga-ekpochapụ ndị mmadụ. '
3:24 Na ndị amụma niile bụ ndị gwara, si Samuel na ebede, mara ọkwa ụbọchị ndị a.
3:25 Unu bụ ụmụ nke ndị amụma na nke agba nke Chineke họpụtara maka nna anyị hà, si Abraham: 'Site gị na mkpụrụ gị ka ezinụlọ niile nke ụwa ga-gọziri agọzi.'
3:26 Chineke kpọlitere Ọkpara ya na zitere ya mbụ ị, na-agọzi gị, nke mere na onye ọ bụla nwere ike atụgharị onwe ya pụọ ​​ajọ omume ya. "
Ọrụ nke Ndịozi 5
5:1 Ma otu nwoke aha ya bụ Ananaịas, ya na nwunye ya Safaịra, rere otu ubi,
5:2 na ọ bụ aghụghọ banyere price nke ubi, ya na nwunye ya nkwenye. Ma na-ewetara nanị akụkụ nke ya, o nyefere ya n'ụkwụ nke onyenchịkwa.
5:3 Ma, Pita kwuru: "Ananias, mere ka Setan nwaa gị n'obi, nke mere na ị ga-agha ụgha iji Mmụọ Nsọ na-aghọ aghụghọ banyere price nke ala?
5:4 Ndi ya abụghị nke gị mgbe ị na-edebe ya? Na ọ na-eresị ya, ọ bụ na ọ bụghị gị ike? Gịnị mere ị ka ihe a n'obi gi? I ụgha ka ndị ikom, ma Chineke!"
5:5 mgbe ahụ Ananias, n'elu nụsịrị okwu ndị a, dara nwụọ. Na a oké egwu bụkwanụ ndị niile nụrụ ya.
5:6 Na-eto eto ndị ikom biliri na wepụrụ ya; na-ebu ya, ha we lìe ya.
5:7 Mgbe ahụ banyere ohere nke awa atọ gafere, ya na nwunye ya banyere, n'amaghị ihe merenụ.
5:8 Ma Pita siri ya, "Gwa m, nwaanyị, ma ọ bụrụ na ị na-ere ọhia nke a ego?"Ma o kwuru, sị, "Ee, maka na ego. "
5:9 Ma Pita siri ya: "Gịnị mere i kwetara ọnụ iji nwalee Mọ nke Jehova? Le, ụkwụ ndị na-eli di-gi di n'ọnu-uzọ, na ha ga-ebu unu!"
5:10 ozugbo, ọ dara n'ala n'ihu ya ukot akpa. Mgbe ahụ ụmụ mmadụ banye na hụrụ ya nwụrụ anwụ. Ha wee bupụ ya ma lie ya n'akụkụ di ya.
5:11 Na a oké egwu wee dum Church na ndị niile nụrụ ihe ndị a.
5:12 Na site na nke dị n'aka ndị Ndịozi ọtụtụ ihe ịrịba ama na ihe-ebube-ya zuru n'etiti ndi. Ma ha niile zutere na otu na Solomon owuwu ụzọ mbata.
5:13 Na n'etiti ndị ọzọ, ọ dịghị onye anwa anwa isonyere ha. Ma ndị uku ha.
5:14 Ugbu a ndị na-adụ ndị ikom na ndị inyom bụ ndị kweere n'Onyenwe anyị na-ebi-amụba,
5:15 nke mere na ha tọrọ-adịkwaghị ike na n'okporo ámá, ịtụkwasị ha na akwa na stretchers, ka ọ were, dị ka Pita ruru, dịkarịa ala ndò ya nwere ike ịda ọ bụla n'ime ha, na ha ga-enwere onwe ha esighị ike.
5:16 Ma a ìgwè nwekwara ọsọ gaa Jerusalem si ha gbara agbata obi obodo, ebu ndị ọrịa na ndị afịna-mọ nādighi ọcha, ndị na-niile gwọọ.
5:17 Mgbe nnukwu onye nchụàjà na ndị niile ya na ha nọ, nke ahụ bụ, ndị jụrụ okwukwe òtù ndị Sadusii, bilie na-ekworo juru.
5:18 Na ha tọrọ aka na Ndịozi, na ha na-etinye ha na ndị nkịtị ụlọ mkpọrọ.
5:19 Ma n'abalị, ihe mmụọ ozi Jehova meghere ibo ụzọ nke ụlọ mkpọrọ ahụ ma duru ha, si,
5:20 "Gaa na-eguzo n'ụlọ nsọ, agwa ndị mmadụ okwu ndị a niile nke ndụ. "
5:21 Ma mgbe ha nụrụ nke a, ha banyere n'ụlọ nsọ na mbụ ìhè, na ha na-akụzi. Ekem akwa oku, na ndị ya na ha nọ, bịakwutere, na ha na-akpọ ọnụ kansul na ndị okenye niile nke ụmụ Izrel. Ha zigara ndị mkpọrọ ka ha me.
5:22 Ma mgbe ndị na-ejere ruteworo, na, n'elu emeghe n'ụlọ mkpọrọ, ahụghị ha, ha laghachiri kọọrọ ha,
5:23 si: "Anyị hụrụ ụlọ mkpọrọ na-akpọchi elu na niile mbo, na ndị nche guzo n'ihu ọnụ ụzọ. Kama n'elu imeghe ya, anyị hụrụ na ọ dịghị onye n'ime. "
5:24 Mgbe ahụ, mgbe majie ụlọ nsọ na ndị isi nchụàjà nụrụ okwu ndị a na, ha bụ ndị na-ejighị n'aka ihe ha, dị ka ihe ga-eme.
5:25 Ma onye rutere ma kọọrọ ha, "Lee, ndi ị enịm ke n'ụlọ mkpọrọ nọ n'ụlọ nsọ, guzo na-ezi ndị mmadụ ihe. "
5:26 Mgbe ahụ majie, na ndị na-ejere, wee me ka ha enweghị ike. N'ihi na ha bụ egwu nke ndị mmadụ, ka ha ghara nkume.
5:27 Na mgbe ha mere ka ha, ha guzoro ha n'ihu kansul. Na nnukwu onye nchụàjà ajụjụ ha,
5:28 na kwuru: "Anyị ike ịtụ gị ka ị ghara izi a aha. N'ihi na, le, ị jupụta Jeruselem gị ozizi, unu na-achọkwa ime ka ọbara nwoke a dị anyị n'isi. "
5:29 Ma Pita na ndi-ozi zara, si: "Ọ dị mkpa irubere Chineke isi, karịa ikom.
5:30 Chineke nke nna nna anyị hà ka Jisos bilie, onye igbu gị, nākwuba Ya n'elu osisi.
5:31 Ọ bụ onye Chineke buliri elu n'aka nri ya dị ka Onye Ọchịchị na Onye Nzọpụta, ka na-enye nchegharị na ngbaghara nmehie nile na Israel.
5:32 Na anyị bụ ndị àmà nke ihe ndị a, na Mmụọ Nsọ, Onye Chineke nyere ndị niile na-erubere ya isi. "
5:33 Mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha nọkwa merụọ, na ha na-eme atụmatụ na-etinye ha nwua.
5:34 Ma onye na kansul, a Farisii aha ya bụ Gameliel, a nkụzi nke iwu asọpụrụ mmadụ niile, bilie nyere iwu ka ndị mmadụ na-na-na-etinye na-abụghị na nkenke.
5:35 Na ọ sịrị ha: "Ndị ikom nke Israel, ị kwesịrị ị na-akpachara anya na ebumnobi gị banyere ndị ikom a.
5:36 N'ihi na tupu ụbọchị ndị a, Theudas steepụ-atụ, na-ekwusi ike na ya na-onye, na a ọnụ ọgụgụ nke ndị ikom, banyere na narị anọ, sonyeere ya na ya. Ma ọ na-gburu, na niile ndị kweere na ya nọ na-agbasasịkwa, na ha na-ebelata ka ihe ọ bụla.
5:37 Mgbe nke a otu, Judas onye Galili steepụ-atụ, na ụbọchị nke na-aha, o wee tụgharịa ndị Izrel onwe ya. Kama ọ na-n'iyi, na ha nile, dị ka ọtụtụ ndị dị ka dụnyeere ya, na-chụgara.
5:38 Na ugbu a mere, M asị unu, ịdọrọ si ndị ikom ndị a na-ahapụ ha. N'ihi na ọ bụrụ na ndụmọdụ a ma ọ bụ ọrụ bụ nke ndị ikom, ọ ga-agbajikwa.
5:39 Ma n'ezie, ma ọ bụrụ na ọ bụ Chineke, ị ga-enwe ike imebi ya, na ma eleghị anya ị pụrụ hụrụ ka Alụwo megide Chineke. "Ha kwetara na ya.
5:40 Na-akpọ na-OZI, ebe tie ha, ha dọrọ aka ná ntị ka ha kwuo okwu mgbe nile na aha Jesus. Ha asuan ha.
5:41 ma n'ezie,, ha wee si na ọnụnọ nke kansul, na-aṅụrị ọṅụ na ha na-atụle kwesiri ahuhu ịkparị na nnọchite nke aha nke Jesus.
5:42 Na ụbọchị ọ bụla, n'ụlọ nsọ na n'etiti ụlọ, ha akwụsịghị izí ihe na izisa ozi ọma Christ Jesus.
Ọrụ nke Ndịozi 6
6:1 N'ụbọchị ndị, dị ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ nọ na-amụba, e mere a ntamu of the Greeks megide Hibru, n'ihi na ha di ha nwụrụ na-emeso ya na nlelị na kwa ozi.
6:2 Na otú mmadụ iri na abụọ, -akpọ ọnụ ndị na-adụ ndị na-eso ụzọ, kwuru: "Ọ dịghị mma ka anyị hapụ n'azụ Okwu Chineke ozi na tebụl na-.
6:3 Ya mere, ụmụnna, chọọ n'etiti onwe unu maka ndị ikom asaa n'ime ezi àmà, juputa na Mọ Nsọ na amam-, bụ ndị anyị nwere onye na-elekọta ọrụ a.
6:4 Ma n'ezie, anyị ga-enwe mgbe nile n'ekpere ma na-eje ozi nke Okwu. "
6:5 Na plan mma dum ìgwè. Na ha họọrọ Stephen, a nwoke jupụtara n'okwukwe na na Mmụọ Nsọ, na Filip na Prochorus na Nicanor na Timon na Parmenas na Nicolas, a ọhụrụ mbata si Antiọk.
6:6 Ndị a ha debere n'ihu n'anya Ndịozi, na mgbe na-ekpe ekpere, ha nyekwara iwu aka na ha.
6:7 Na Okwu nke Onye-nwe e amụba, na ọnụ ọgụgụ nke eso ụzọ nọ na Jerusalem nọ na uba nke-uku. Na ọbụna a nnukwu ìgwè ndị nchụàjà bụ ndị nāṅa kwa okwukwe.
6:8 mgbe ahụ Stephen, jupụtara n'amara na obi ike, zọputa oké ihe ịrịba ama + na ọrụ ebube n'etiti ndi-.
6:9 Ma ụfọdụ ndị, si n'ụlọ nzukọ ndị a na-akpọ Libertines, na nke ndị Saịrini, na nke Aleksandria, na nke ndị bu si Silishia na Eshia bilie e ese okwu Stephen.
6:10 Ma ha enweghị ike iguzogide amamihe na mmụọ o na-ekwu okwu.
6:11 Mgbe ahụ, ha suborned ndị ikom bụ ndị na-ekwu na ha nuru ya na-ekwu okwu okwu nkwulu megide Moses megide Chineke.
6:12 Otú a ka ha nwuo na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ. Na ọsọ ọsọ ọnụ, ha jide ya, kpụrụ ya gaa Sanhedrin.
6:13 Ha elu àmà ụgha, bụ onye sịrị: "Nwoke a adịghị akwụsị ikwu okwu megide ebe nsọ ahụ na iwu.
6:14 N'ihi na anyị anụwo ya na-asị na nke a bụ Jizọs onye Nazaret ga-ebibi ebe a na ga-agbanwe omenala, nke Moses nyefere anyị n'aka. "
6:15 Na ndị niile nọ ọdụ na kansul, ele anya na ya, hụrụ ya ihu, dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-ihu nke ihe Angel.
Ọrụ nke Ndịozi 7
7:1 Ekem akwa oku kwuru, "Ọ bụ ihe ndị a ka?"
7:2 Na Stephen kwuru: "Noble ụmụnna nwoke na nna, ege. Chineke nke ebube pụtara ìhè n'ihu nna nna anyị Abraham, mgbe ọ nọ na Mesopotemia, tupu o biri na Heran.
7:3 Chineke we si ya, 'Pụọ site n'ala gị na site na gị n'umu, na-aga n'ime ala ahụ m ga-egosi gị. '
7:4 Mgbe ahụ, ọ we si n'ala ndi Kaldea, na o biri ndụ na Haran. na mgbe e mesịrị, mgbe nna ya nwụrụ, Chineke mere ya n'ala a, na nke ị na ugbu a biri.
7:5 O we nye ya ihe nketa ọ bụla n'ime ya, ọbụna ohere nke otu nzọụkwụ. Kama o kwere nkwa ya nye ya ka ọ bụrụ nke, na ụmụ ya mgbe ya, ezie na ọ bụghị ndị nwere a nwa.
7:6 Mgbe Chineke gwara ya na ụmụ ya ga-abụ onye ọbịa n'ala ọzọ, na na ha ga-merie ha, ma na-emeso ha merụsịrị, nnù arọ.
7:7 'Ma mba ndị ha ga-eje ozi, M ga-ekpe ikpe,'Kwuru na Jehova. 'Mgbe ihe ndị a, ha gēwezuga kwa onwe-na ga-eje ozi m n'ebe a. '
7:8 O we nye ya ọgbụgba ndụ nke ibi úgwù. O wee tụrụ ime Aịzik na biri ya úgwù n'ụbọchị nke asatọ,. Na Aịzik turu ime Jacob, na Jekọb, iri na abụọ Nna Ochie.
7:9 Na Nna Ochie, ịbụ na-ekwo ekworo, rere Josef bata n'Ijipt. Ma na Chineke nọnyeere ya.
7:10 Ọ napụtara ya si ná mkpagbu ya niile. O we nye ya amara na amamihe n'ihu Fero, eze Ijipt. Ọ họpụtara ya ka ya nāchi Egypt na n'elu ulo-ya nile.
7:11 Mgbe ahụ a ụnwụ dara na niile nke Ijipt na Canaan, na a oké mkpagbu. Na nna anyị hà ahụghị nri.
7:12 Ma mgbe Jekọb nụrụ na ọka di n'Ijipt, o zigara nna anyị hà mbụ.
7:13 Na nke abụọ oge, Joseph ghọtara site ụmụnne ya, na ya okpu e mere pụta ìhè nye Fero.
7:14 Mgbe Joseph we me nna ya Jacob, na niile ndị ikwu ya, iri asaa na ise mkpụrụ obi.
7:15 Na Jekọb gbadara n'ime Egypt, o agabigawo, otú ahụkwa ka nna nna anyị hà.
7:16 Na ha gafetara Shikem, na ha na-enịm ke n'ílì nke Abraham zụtara maka ego site n'aka ụmụ Hemọ, nwa Shechem.
7:17 Na mgbe oge nke nkwa Chineke kpugheere Abraham we biarue nso, ndị ụba na ha bara uba Egypt,
7:18 ọbụna ruo mgbe eze ọzọ, onye na-amaghị Joseph, bilie Egypt.
7:19 Nke a, asị anyị n'umu, n'ala nna nna anyị hà, nke mere na ha ga-ekpughe ha ụmụ ọhụrụ, ka ha ghara ga-edebe ndụ.
7:20 N'otu oge, A mụrụ Mozis. Na ọ bụ na amara nke Chineke, ọ na-edozikwa ọnwa atọ n'ulo nna-ya.
7:21 Mgbe ahụ, ebe a gbahapụrụ, nwa-nwayi Fero we jide ya, na ọ kpọlite ​​ya dị ka nwa ya nwoke.
7:22 Na a kụziiri Mozis ihe n'amamihe niile nke ndị Ijipt. O bu dike na okwu ya na omume-Ya nile.
7:23 Ma mgbe iri anọ afọ dechara na ya, ya bilie n'obi ya na ya kwesịrị ịga leta ụmụnne ya, ụmụ Izrel.
7:24 Na mgbe ọ hụrụ otu onye na-ata ahụhụ mmerụ, ọ gbachiteere ya. Na-egbu ndị Ijipt, O me ihe a ịkwụ ụgwọ maka ya bụ onye na-atachi obi ọjọọ.
7:25 Ugbu a, ọ sịrị na na ụmụnne ya ga-aghọta na Chineke ga-enye ha nzọpụta site n'aka-ya. Ma ha aghọtaghị ya.
7:26 Ya mere n'ezie, n'echi, ọ pụtara n'ihu ndị na-na-na-arụ ụka, na ọ gaara ná mma ha na udo, si, 'Men, bụ ụmụnna. Ya mere, gịnị ka ị ga-emerụ ibe?'
7:27 Ma ọ bụ onye na-eme ihe ọjọọ na onye agbata obi ya jụrụ ya, si: 'Ònye mere gị onye ndú na-ikpe n'ebe ayi?
7:28 Ọ pụrụ ịbụ na ị chọrọ igbu m, na n'otu ụzọ ahụ ị gburu onye Ijipt nyahuru?'
7:29 Mgbe ahụ, na okwu a, Moses ọsọ. O wee a ọbịa n'ala nke Midian, ebe ọ na-emepụta abụọ ụmụ.
7:30 Na mgbe iri afọ anọ e dechara, pụtara ìhè n'ihu ya, n'ọzara nke Ugwu Saịnaị, ihe Angel, na a ire ọkụ nke ọkụ na a ohia.
7:31 Na n'elu hụrụ nke a, Moses jukwara ya anya mgbe n'anya. Na dị ka ọ na-eru nso iji na-ele anya na ya, olu nke Jehova ruru ya, si:
7:32 'Abụ m Chineke nke nna nna gị hà: Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aisak, na Chineke nke Jekọb. 'Ndien Moses, a mere na-ama jijiji, agaghị anwa anwa lee.
7:33 Ma Onyenwe anyị gwara ya,: 'Tọpụ akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ gị. N'ihi na ebe nke unu na-eguzo bụ ala nsọ.
7:34 N'ezie, Ahụwo m na-emekpa ndị m bụ ndị nọ n'Ijipt, na m nụrụ na ha na-asụ ude. Ya mere, M na-agbadata ka onwe ha. Ma ugbu a,, -aga, m ga-ezitere gị n'ime Egypt. '
7:35 Nke a Moses, onye ha jụrụ site na-ekwu, 'Ònye mere gị onye ndú na onyeikpe?'Bụ onye Chineke zitere na-ndú na mgbapụta, site n'aka nke Angel onye pụtara ìhè n'ihu ya na ohia.
7:36 Nwoke a duuru ha, na-emezu ihe ịrịba ama na ihe ebube n'ala Ijipt, na n'Oké Osimiri Uhie, nakwa na mbara, ruo afọ iri anọ.
7:37 Nke a bụ Moses, onye kwuru, sị ụmụ Israel: 'Chineke ga-họpụtara unu onye amụma nke dị ka m si na gị onwe gị na ụmụnne. Ị ga-ege ntị ya. '
7:38 Nke a bụ na ọ bụ onye na Church na wilderness, na Angel onye nọ na-agwa ya n'Ugwu Saịnaị, na nna nna anyị hà. Ọ bụ onye na natara okwu nke ndụ na-enye anyị.
7:39 Ọ bụ onye na nna anyị hà achọghị irube isi. Kama, ha jụrụ ya, n'ime obi ha na ha ahapụ n'ebe Egypt,
7:40 sị Aaron: 'Mee ka chi anyị, nke nwere ike na-aga n'ihu anyị. N'ihi na nke a Moses, emi ada anyị si n'ebe ala Ijipt, anyị amaghị ihe mere ya. '
7:41 Ha wee yie a nwa ehi n'ụbọchị ndị ahụ, na ha chuara arụsị, na ha ṅụrịrị ọṅụ na ọrụ nke aka-ha.
7:42 Chineke we chigharia, o nyefee ha n'aka, ka edo onwe ha n'okpuru ndị agha heaven, dị nnọọ ka e dere ha n'Akwụkwọ Ndị Amụma: 'Ọ bụ na unu na-enye tara na àjà m ruo afọ iri anọ n'ọzara, Unu ulo Israel?
7:43 Ma unu were onwe unu ụlọikwuu Moloch na kpakpando nke chi Rephan, ọgụgụ nke unu onwe unu kpụrụ iji ife ha. N'ihi ya, m ga-arafu gị, gafee Babịlọn. '
7:44 Ikwū nke ihe-àmà ahu na nna nna anyị hà na desert, dị nnọọ ka Chineke họpụtara ka ha, okwu Moses, nke mere na ọ ga-eme ya dị ka ọdịdị na ọ hụrụ.
7:45 Ma nna nna anyị hà, anata ya, mekwara ka ya, na Joshua, n'ala nke mba, onye Chineke chụpụrụ n'ihu nna nna anyị hà, rue ubọchi nke David,
7:46 onye hụrụ amara n'iru Chineke na onye jụrụ ka o wee nweta a ụlọikwuu ahụ maka ebe Chineke nke Jekob.
7:47 Ma, ọ bụ Solomon onye wuru ya ụlọ.
7:48 Ma Onye Kasị Elu adịghị ebi n'ulo wuru aka, dị ka o kwuru site n'ọnụ onye amụma:
7:49 'Eluigwe bụ ocheeze m, na ụwa bụ ihe mgbakwasị ụkwụ m. Olee ụdị ụlọ ị ga-ewuru m? ka Jehova kwuru. Na nke bụ izu ike m ebe?
7:50 Ọ bụ aka m mere ihe a niile?'
7:51 -Ekwesi olu ike na-ebighị úgwù n'obi na ntị, Ị mgbe iguzogide Mmụọ Nsọ. Dị nnọọ ka nna nna unu hà mere, otú a kwa ka ị na-eme.
7:52 Olee nke bụ nke amụma nwere nna nna gị hà na-akpagbu? Na ha gburu ndị buru amụma na biakwa obibia nke Naanị Otu. Na i ugbu a ghọọ-arara mmadụ nye ndị na-egbu ya.
7:53 Ị natara iwu site na omume nke ndị mmụọ ozi, ma unu edebeghi ya. "
7:54 Mgbe ahụ, n'elu nụrụ ihe ndị a, ha nọkwa merụọ n'obi ha, ha gnashed ha ezé megide ya.
7:55 ma ọ, jupụtara na mmụọ nsọ, na njuputa enyịn ese heaven, hụ ebube Chineke na Jizọs guzo n'aka nri nke Chineke. O wee sị, "Lee, M na-ahụ ka eluigwe meghere, na Nwa nke mmadụ ka o guzo n'aka nri Chineke. "
7:56 mgbe ahụ, ha, na-eti mkpu n'oké olu, egbochi ha ntị na, ji otu, bugara ike n'ebe ọ nọ.
7:57 Na-akwọ ụgbọala ya, n'ofè obodo, ha wee tụọ ya nkume. Na àmà enịm uwe ha n'akụkụ ụkwụ a na-eto eto, bụ onye a kpọrọ Saul.
7:58 Ka ha nọ na nkume tụgbuo Stivin, O tie nkpu, si, "Onyenwe anyị Jizọs, nara mmụọ m. "
7:59 Mgbe ahụ, ọ na e me ka ikperè-ya abua, o wee jiri oké olu, si, "Onyenwe anyị, alala mmehie a megide ha. "Mgbe o kwuru nke a, ọ dara n'ụra n'ime Onyenwe. Sọl ya ekweta ya igbu ọchụ.
Ọrụ nke Ndịozi 9
9:1 Ma Sọl, ka na-eku ume egwu na-eti megide-eso ụzọ Onyenwe, gara nnukwu onye nchụàjà,
9:2 o rịọrọ ya maka akwụkwọ ozi ka n'ụlọ nzukọ na Damaskọs, ka ọ were, ọ bụrụ na ọ hụrụ ihe ọ bụla ndị mmadụ ma ọ bụ ndị inyom nke a Way, o nwere ike na-edu ha dị ka ndị mkpọrọ na Jerusalem.
9:3 Na dị ka o mere na njem, ya mere na ọ nọ na-eru nso Damascus. na mberede, a ìhè si n'eluigwe nwuo gburugburu ya.
9:4 Na-atapụsị n'ala, ọ nụrụ olu na-asị ya, "Saul, Saul, gịnị mere i ji na-akpagbu m?"
9:5 O wee sị, "Onye ka ị bụ, Jehova?"O: "Abụ m Jizọs, onye ị na-akpagbu. Ọ bụ ike ka i agaghịkwa megide ndụdụ. "
9:6 o, ịma jijiji na anya, kwuru, "Onyenwe anyị, ihe ị chọrọ ka m mee?"
9:7 Na Onyenwe anyị gwara ya, "Bilie ma na-aga n'ime obodo ahụ, na n'ebe ahụ ka ị ga-gwara ihe i kwesịrị ime. "Ma ndị ikom ndị na so ya guzo stupefied, ikpe n'ezie a olu, ma na-ahụ na ọ dịghị onye.
9:8 Sọl we bilie si n'ala. Na n'elu na-emeghe anya ya, ọ hụrụ ihe ọ bụla. Ya mere na-eduga ya site n'aka, ha we me ya Damaskọs.
9:9 Na na na ebe, ọ bụ na-enweghị anya ruo ụbọchị atọ, ọ dịghịkwa eri ma ọ ṅụọ.
9:10 Ugbu a, e nwere otu eso ụzọ na Damaskọs, aha ya bụ Ananaịas. Ma Jehova gwara ya a ọhụụ, "Ananias!"O wee sị, "Anọ m ebe a, Onyenwe anyị. "
9:11 Na Onyenwe anyị gwara ya: "Bilie ma na-aga n'okporo ụzọ a na-akpọ Nke Kwụ Ọtọ, na-achọ, n'ulo Judas, onye aha ya bụ Sọl nke Tasọs. N'ihi na, le, o na-ekpe ekpere. "
9:12 (Na Pọl hụrụ otu nwoke aha ya bụ Ananayas batara ma amanye aka n'isi ya, ka o wee na-enweta ya n'anya.)
9:13 Ma Ananias zara: "Onyenwe anyị, M nụrụ n'ọnụ ọtụtụ banyere nwoke a, otú ọtụtụ nsogbu o mere gị nsọ Jerusalem.
9:14 O nwere ikike n'ebe a nke ndị ndú nke ndị nchụàjà ka ha kee ndị niile na-akpọkukwa aha gị. "
9:15 Jehova we si ya: "Gaa, n'ihi na nke a na otu onye bụ ngwá họọrọ m na-ezitere m aha n'ihu mba na ndị eze na ụmụ nke Israel.
9:16 N'ihi na m ga-ekpughe ya otú ihe o ga-ata ahụhụ n'ihi aha m. "
9:17 Na Ananias la. Na ọ banyere n'ụlọ. Na-ebikwasị ya aka n'isi ya, o kwuru, sị: "Nwanna Saul, Onyenwe anyị Jizọs, onye pụtara ìhè n'ihu gị n'ụzọ nke i rutere, zitere m nke mere na ị ga-enweta gị n'anya ma jupụta na Mmụọ Nsọ. "
9:18 Ozugbo, ọ bụ dị ka ma ọ bụrụ na akpịrịkpa dara ya anya, na o nwetara ya n'anya. Na ebili, e mere ya baptizim.
9:19 Na mgbe ọ naara a nri, ọ nọ ike. Ugbu a ọ bụ na-eso ụzọ bụ ndị na Damascus ruo ụbọchị ụfọdụ.
9:20 Ndien enye ama nọgidere na-ekwusa Jesus n'ụlọ nzukọ: na ọ bụ ya bụ Ọkpara Chineke.
9:21 Ndị niile nụrụ ya ju ha anya, ha we si, "Onye a ọ bụghị onye na-, na Jerusalem, e-alụ ọgụ megide ndị n'ịkpọku aha a, na ndị bịara ebe a maka nke a: ka o we duru ha na ndị ndú nke ndị nchụàjà?"
9:22 Ma Sọl nọ na-amụba ka ukwuu na ike, o wee na-confounding ndị Juu bi na Damaskọs, site ekwu na ọ bụ ya bụ Kraịst.
9:23 Na mgbe ọtụtụ ụbọchị e dechara, ndị Juu natara ndụmọdụ dị ka otu, ka ha wee gbuo ya.
9:24 Ma ha aghụghọ bịara mara Sọl. Ugbu a, ha na-na-ekiri na ọnụ ụzọ ámá, ehihie na abalị, ka ha wee gbuo ya.
9:25 Ma na-eso ụzọ, na-ewere ya na-apụ n'abalị, zitere ya n'elu mgbidi site na ime ka ya na a nkata.
9:26 Na mgbe o rutere Jerusalem, ọ nwara isonyere ndị ahụ na-eso ụzọ. Ha nile na-atụ egwu ya, ghara ikwere na ọ bụ onye na-eso.
9:27 Ma Banabas we wezuga ya ma duru ya na Ndịozi. O wee kọwaara ha otú ahụ ọ hụrụ Jehova, na na ọ gwara ya okwu, na otú, na Damascus, o ji ikwesị ntụkwasị obi na aha Jesus.
9:28 Ya na ha, abanye na-apụ apụ Jerusalem, na-eme ikwesị ntụkwasị obi na aha Jehova.
9:29 Ọ na-na-ekwu okwu na ndị mba ọzọ na-ese okwu na-Grik. Ma ha na-achọ igbu ya.
9:30 Na mgbe ụmụnna ghọtara nke a, ha we me ya Sesaria ma ziga ya Tasọs.
9:31 N'ezie, na Church-ra udo nile nke Judia na Galili na Sameria, na na ọ na-ewuli elu, mgbe na-eje ije n'egwu Jehova, na a na-jupụtara na nkasi-obi nke Mọ Nsọ.
9:32 Mgbe ahụ, ọ dabara na Peter, dị ka ọ gara na n'ebe nile, bịara ndị nsọ, ndị bi na Lida.
9:33 Ma ọ hụrụ na e nwere otu nwoke onye, aha ya bụ Aeneas, onye a kpọnwụrụ akpọnwụ, onye sowooro na bed maka afọ asatọ.
9:34 Na Pita wee sị ya: "Aeneas, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na-agwọ gị. Bilie na ndokwa gị bed. "Ozugbo o biliri.
9:35 Na ndi nile bi na Lida na Sharon hụrụ ya, na ha a tọghatara Jehova.
9:36 Ugbu a na Joppa, e nwere otu eso ụzọ Jizọs aha Tabitha, nke na translation a na-akpọ Dorcas. Ọ we juputa na ezi ọrụ na almsgiving na ọ na-emezu.
9:37 Ma ọ mere na, n'ụbọchị ndị, ọ dara ọrịa ma nwụọ. Ma mgbe ha na-asa ya, na ha tọrọ ya n'otu ụlọ elu.
9:38 Ugbu a, ebe Lida bụ nso Joppa, na-eso ụzọ, nụrụ na Pita nọ n'ebe ahu, zipụ ndị ikom abụọ na ya, na-arịọ ya: "Atụla adịghị abịa ngwa ngwa ka anyị."
9:39 mgbe ahụ Peter, ebili, wee soro ha. Na mgbe o rutere, ha mere ka ụlọ elu dị. Na niile di ha nwụrụ ndị guzo ya gburugburu,, akwa ákwá ma na-egosi ya ndị tunics na uwe na Dọkas mere ha.
9:40 Na mgbe ha nwere niile e zitere n'èzí, Peter, gburu ikpere n'ala, kpere ekpere. Ma na-atụgharị ahụ, o kwuru, sị: "Tabitha, bilie. "O meghere anya ya na, mgbe ọ hụrụ Peter, nọdụ ọzọ.
9:41 Na àjà ya n'aka-ya, na o weliri ya elu. Na mgbe ọ na-akpọ na ndị nsọ na ndị inyom di ha nwụrụ, o nyere ya ndụ.
9:42 Ugbu a, a bịara mara nile nke Joppa. Na ọtụtụ kweere n'Onyenwe.
9:43 Ma ọ mere na o ji biri ruo ọtụtụ ụbọchị na Joppa, na a Saịmọn, a-esiji akpụkpọ anụ.
Ọrụ nke Ndịozi 10
10:1 Ugbu a, e nwere otu nwoke nọ na Sisaria, aha ya bụ Kọnịliọs, a agha nke ìgwè ndị agha nke a na-akpọ Italian,
10:2 a nwoke ji okpukpe kpọrọ, atụ egwu Chineke, na ulo-ya nile, enye ọtụtụ ebere na ndị mmadụ, na-ekpeku Chineke ekpere mgbe niile.
10:3 Nwoke a hụrụ n'ọhụụ n'ụzọ doro anya, na ka awa nke itoolu nke ụbọchị, Mọ-ozi nke Chineke na-abanye na ya, na-asị ya: "Cornelius!"
10:4 o, ele anya na ya, e jide egwu, o wee sị, "Kedu ihe ọ bụ, onyenwe?"Ma ọ sịrị ya: "Ekpere na gị almsgiving arịgowo dị ka a ncheta n'iru Chineke.
10:5 Ma ugbu a,, iziga ndị mmadụ Joppa kpọọ otu Simon, onye na-akpọkwa Pita.
10:6 Nwoke a bụ ọbịa na a Saịmọn, a-esiji akpụkpọ anụ, onye ụlọ bụ n'akụkụ oké osimiri. Ọ ga-agwa gị ihe ị ga-eme. "
10:7 Ma mgbe Angel onye nọ na-agwa ya ahụ hapụrụ, ọ na-akpọ, nke ndị na-n'okpuru ya, abụọ nke ezinụlọ ya na ndị ohu na a agha na-atụ egwu Chineke.
10:8 Na mgbe ọ kọwara ihe niile ha, O ziga ha na Joppa.
10:9 Mgbe ahụ, n'echi, mgbe ha nọ na-eme njem na-abịaru obodo, Peter rịgooro n'elu ụlọ, ka o we ekpe ekpere, na awa nke isii.
10:10 Na ebe ọ bụ agụụ na-agụ, ọ chọrọ inweta ụfọdụ nri. Mgbe ahụ, ka ha nọ na-akwadebe ya, ihe ecstasy nke uche dara n'elu ya.
10:11 O wee hụ ka e meghere eluigwe, na a na-akpa-agbadata, dị ka ma ọ bụrụ na a nnukwu ibé ákwà linin e wetuo, site na ya na nkuku anọ, si n'eluigwe ụwa,
10:12 na nke ndị niile anọ na-footed anụ ọhịa, na crawling ihe nke ụwa na anụ ihe nke elu-igwe.
10:13 Na a olu wee sị ya: "Bilie, Peter! Egbu ma na-eri. "
10:14 Ma, Pita kwuru: "Tụfịakwa m, onyenwe. N'ihi Eritụbeghị m ihe ọ bụla jikọrọ ma ọ bụ adịghị ọcha. "
10:15 Na olu, ọzọ a nke ugboro abụọ ya: "Ihe Chineke ọcha, i gaghi-akpọ nkịtị. "
10:16 Ugbu a nke a mere ugboro atọ. Ozugbo na akpa na e weere heaven.
10:17 Ma ka Pita nọ ka azụ n'ime onwe ya dị ka na ihe ọhụụ, nke ọ hụrụ, pụtara, le, ndị e zigara si Cornelius guzo n'ọnụ ụzọ ámá, ịjụ ajụjụ banyere ụlọ Saịmọn.
10:18 Ma mgbe ha na-akpọ si, ha jụrụ ma ọ bụrụ na Simon, onye na-akpọkwa Pita, bụ a ọbịa ebe.
10:19 Mgbe ahụ, dị ka Pita nọ na-eche banyere ọhụụ, Mọ si ya, "Lee, ndị ikom atọ na-achọ gị.
10:20 Ya mere, bilie, ịgbada, na-aga na ha, n'enweghị obi abụọ ọ bụla. N'ihi na m zitere ha. "
10:21 mgbe ahụ Peter, agbadata ndikom, kwuru: "Lee, Abụ m onye ị na-achọ. Gịnị bụ ihe mere nke i rutere?"
10:22 Ha we si: "Cornelius, a agha, a dị nnọọ na-atụ egwu Chineke, onye nwere ezi àmà si mba ahụ dum nke ndị Juu, natara ozi site na a nsọ Angel ka a kpọọ gị ka ụlọ ya na-ege ntị okwu site na gị. "
10:23 Ya mere, na-eduga ha na, ọ natara ha dị ka ndị ọbịa. Mgbe ahụ, na-esonụ ụbọchị, ebili, ọ malitere na ha. Na ụfọdụ n'ime ụmụnna si Jọpa soro ya.
10:24 Na na na-esote ụbọchị, ọ banyere Caesarea. Na n'ezie, Kọniliọs nọ na-echere ha, ọ kpọkọtara ezinụlọ ya na ezigbo ndị enyi.
10:25 Ma ọ mere na, mgbe Pita banyere, Cornelius we je izute ya. Na-ada n'ihu ya ụkwụ, ọ reverenced.
10:26 Ma n'ezie, Peter, eweli ya elu, kwuru: "Bilie, n'ihi na m na-m bụ mmadụ. "
10:27 Na-ekwu okwu na ya, ọ banyere, na ọ hụrụ ọtụtụ ndị na-gbakọtara.
10:28 Na ọ sịrị ha: "Unu maara otú árú ọ ga-abụ maka otu nwoke onye Juu na-esonyere na, ma ọ bụ na-atụkwasịkwara, a mba ọzọ ndị mmadụ. Ma Chineke mere ka m ịkpọ mmadụ ọ bụla nkịtị ma ọ bụ na-adịghị ọcha.
10:29 N'ihi nke a na-enweghị obi abụọ, M bịara mgbe kpọrọ. Ya mere, Ana m ajụ gị, maka ihe kpatara na unu kpọrọ m?"
10:30 Na Kọnịliọs sịrị: "Ọ bụ ugbu a na-anọ, a nnọọ hour, ebe m na-ekpe ekpere n'ụlọ m n'awa nke itoolu, ma, le, a nwoke guzoro n'ihu m na a na-acha ọcha vestment, o wee sị:
10:31 'Cornelius, gị na a nụwo na gị almsgiving e chetara na n'anya Chineke.
10:32 Ya mere, -eziga ka Joppa kpọọ Simon, onye na-akpọkwa Pita. Nwoke a bụ ọbịa n'ụlọ Saịmọn, a-esiji akpụkpọ anụ, n'akụkụ oké osimiri. '
10:33 Ya mere, M n'egbughị oge zitere gị. Na i mere nke ọma na-abịa ebe a. Ya mere, anyị niile bụ ndị ugbu a ugbu a na gị n'anya ịnụ ihe niile na ndị a kụziiri gị site na Onyenwe anyị. "
10:34 Mgbe ahụ, Peter, asaghe ọnụ ya, kwuru: "Mụ na eziokwu na ọ bụghị Chineke a naele mmad.
10:35 Ma n'ime mba ọ bụla, onye ọ bụla nke na-atụ egwu ya ma na-arụ ọrụ ikpe ziri ezi na-anakwere ya.
10:36 Chineke zitere Okwu ụmụ Izrel, ezikwa udo site na Jizọs Kraịst, n'ihi na ọ bụ Jehova nke niile.
10:37 Ị maara na Okwu e mere ka a mara nile Judea. N'ihi mmalite si na Galili, mgbe baptism nke Jọn kwusara,
10:38 Jesus of Nazareth, onye Chineke tere mmanụ na Mọ Nsọ na ike, gara gburugburu na-eme ihe ọma ma na-agwọ ndị niile na-emegbu emegbu site ekwensu. N'ihi na Chineke nọnyeere ya.
10:39 Na anyị bụ ndị àmà nke ihe niile o mere na mpaghara nke Judia na na Jerusalem, ọ bụ onye ha gburu, nākwuba Ya n'elu osisi.
10:40 Abasi anam enye eset na n'ụbọchị nke atọ na kwere ya ka Ọ puta ìhè,
10:41 bụghị mmadụ niile, ma ka ndị àmà preordained Chineke, ndị nke anyị bụ ndị riri ma ṅụọ na ya mgbe o bilie ọzọ si na ndị nwụrụ anwụ.
10:42 Ọ gwara anyị ka anyị ikwusara ndị mmadụ ozi, na-agba akaebe na ọ bụ ya bụ onye na-Chineke họpụtara na-onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.
10:43 Iji ya ndị amụma nile na-enye ihe àmà na site n'aha ya niile ndị kwere na ya na-enweta mgbaghara mmehie. "
10:44 Ka Pita nọ na-ekwu okwu ndị, Mmụọ Nsọ dara niile nke ndị na-nọ na-ege Okwu.
10:45 Na-ekwesị ntụkwasị obi nke ibi úgwù, Ọ bịara na Peter, ju ha anya na amara nke Mmụọ Nsọ na-wụsara ndị mba ọzọ.
10:46 N'ihi na ha nụrụ ka ha na-ekwu okwu n'asụsụ nke na-etokwa Chineke.
10:47 Pita wee,, "Olee otú onye ọ bụla gbochie mmiri, nke mere na ndị natara Mmụọ Nsọ ga-adịghị baptizim, dị nnọọ ka anyị na-abụrịrị?"
10:48 Na o nyere ha iwu ka ha baptizim n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Mgbe ahụ, ha rịọrọ ya ka ọ nọrọ na ha ruo ụbọchị ụfọdụ.